कुलमान बाहिरिएसँगै विद्युत कटौती बढेको गुनासो आज पनि ठाउँ’ठाउँमा विद्युत कटौती
Homeसमाचारकुलमान बाहिरिएसँगै विद्युत कटौती बढेको गुनासो आज पनि ठाउँ’ठाउँमा विद्युत कटौती
October 3, 2020 admin समाचार 11904
नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक रहेका कुलमान घिसिङको ४ वर्षे कार्यकाल सकिएर उनी बाहिरिएसँगै विद्युत कटौती बढेको गुनासो बढ्न थालेको छ ।
व्याप्त जनगुनासो बढेपछि उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनको सचिवालये विना जानकारी विद्युत कटौती भए सिधा सम्पर्क गर्न आह्वान समेत गर्‍यो । तर, पनि विद्युत कटौतीको क्रम रोकिएको छैन ।
यद्यपि प्राधिकरणले सूचना दिएरै विद्युत कटौती गर्न थालेको छ ।
विभिन्न स्थानमा मर्मत सम्भार तथा पोल स्थानान्तरण लगायतका कारणले विद्युत कटौती गर्न परेको प्राधिकरणले प्रष्ट्याएको छ । नेपाल विद्युत् प्रधिकरणका अनुसार आज शनिबार पनि देशका विभिन्न स्थानमा विद्युत कटौती भइसकेको छ । कतै हुने क्रममा छ ।
यस्तै बाला’जु वित’रण केन्द्रअन्त’र्गत पर्ने विष्णु’मति फिडरमा चक्रपथ विस्ता’र कार्य जारी रहे’काले १० बजेदेखि ३ बजे’सम्म बत्ती काटिने बताइ’एको छ ।
यस्तै वाइ’पास विद्युत् संरचना सार्न तथा व्यव’स्थापन गर्न चितवनको भरतपुर र माडीमा बिहान ७ बजेदेखि नै विद्यु’त कटौती गरिएको दिउँसो १ बजेसम्म बत्ती नआउने प्रा’धिकरणले जनाएको छ ।
चित’वनकै मेघौली, नारा’यणगढ, गीतान’गर तथा रामपुरमा बुस कटिङ गर्न ट्रान्सफर्मरको इन्कमिङ भीसीबी परि’वर्तन गर्न सोही समयमा बत्ति काटिने बताइ’एको छ । चितव’नको अन्य केही स्थानमा पोल सार्न र फिडर मर्मत गर्न ब’त्ती काटिने छ ।
नवल’पुरको कावा’सोती र अरूण’खोलामा पनि बुस कटिङ गर्न बिहान ८ बजेदे’खि विद्युत कटौती भएको छ । त्यस क्षेत्रको विद्यु’त दिउँसो ४ बजे’पछि सुचारू हुने छ ।
पोखरा’को हेम्जा’मा स्मार्ट मिटर परिव’र्तन गर्न १० बजेदेखि ५ बजेसम्म र धरा’नदेखि धन’कुटासम्म बुस कटिङ गर्न शनिबार १० बजेदेखि ५ बजेसम्म विद्युत कटौती गरिने प्राधिक’रणले जनाएको छ । – खबर हब बाट
फेरी गुमायौं अर्का देशका युवा चिकित्सक, डा. मुराद हुसेनको कोभिड–१९ को सं’क्रमणबाट नि’धन
May 23, 2021 admin समाचार 5103
अर्थोपेडिक सर्जन डा. मुराद हुसेनको कोभिड–१९ को सं’क्रमणबाट निध’न भएको छ । आइतबार विहान ६ बजे नेपाल मेडिसिटी अस्पतालमा उपचारको क्रममा ३४ वर्षीय डा. मुरादको नि’धन भएको हो । कलेजमा पढ्दा उनका सिनियर रहेका डा.
June 16, 2021 admin समाचार 4699
March 21, 2021 admin समाचार 5429